पढ्नका लागि भारत पठाइएका छोरा ५ वर्षपछि छोरी बनेर फर्किए, प्रहरीसँगको बयानले गाउँले झन चकित ! – Classic Khabar
May 23, 2021 273
सुन्दर भविष्य सोचेर भारत पठाइएको छोरो पाँच वर्षपछि छोरी बनेर फर्किँदा बाबुआमा मात्र होइन गाउँले नै चकित परेका छन् ।कन्चनपुरमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । बाबुले छोरोलाई पढ्नको लागि भारत पठाए ।तर पछि फर्किँदा छोरो त छोरी बनेर फर्किइन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लाका १७ वर्षे सुरेन्द्र माल २०७१ सालमा १२ कक्षा पढेर बुवासँगै भारत गए ।
भारतमा कम्प्युटर सिकेर उज्ज्वल भविष्य बनाउने उनको सपना थियो ।५ वर्षपछि घर फर्किंदा उनी ‘केटी’ प्रियंका बनेकी छन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।भारतमा सवारी चालकको काम गर्ने बुवा जयराज मालले उनलाई उत्तराखण्डको हरिद्वारमा कम्प्युटर सिकाउन इन्स्टिच्यूटमा भर्ना गर्दिएका थिए । बुवा जयराज देहरादून चल्ने गाडी चलाउने भएकाले सधैं सुरेन्द्रसँगै हुँदैन्थे ।
सुरेन्द्र प्रियंका कसरी बने ?इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा यही घटनाको उजुरी परेपछि त्यसलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले बताए । प्रियंकाले प्रहरीसमक्ष औषधि खुवाएर तथा सुइ लगाएर लिङ्ग परिवर्तन गरिएको बयान दिएका छन् । आफ्नो लिङ्ग जबरजस्ती परिवर्तन गराउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रियंकासहित परिवारले उजुरी दिएको हो । प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि प्रहरीको आग्रहमा महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगरले प्रियंकाको स्वास्थ्य जाँच गरेको छ । औषधि र सुइका कारण ‘हर्मोन’मा परिवर्तन गर्न सकिने महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।उनले भने, ‘स्वेच्छिक लिङ्ग परिवर्तन गरिएका थुप्रै घटना सुनिन्छन् । तर, प्रियंकाको हकमा जबरजस्ती भएको देखिन्छ ।’
Prevआर्बौ खर्चेर किन चुनाव गर्ने भन्दा बास्कोटाको जवाफ : कोरोना लाग्नेले किन भात खाने ?
Nextयी श्रीमान् जसले ८ घण्टा पिठ्यूँमा बोकेर को’रोना संक्रमित श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्‍याए